Ingdọ aka na ntị banyere iji chebe ndị mmado gị nọ na AŞTİ | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraIngdọ aka na ntị banyere gị chekwaa ndị mmado nọ na AŞTİ
25 / 03 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, Foto, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
Warningdọ aka na ntị banyere ashma
Obodo Ankara na-aga n'ihu na-adọ ụmụ amaala aka na ntị aka site na ịme ihe ọhụrụ iji luso ọgụ Coronavirus ahụ. Site na ngwa ọhụrụ a emere na Başkent, etinyela ihe mmado 'n'ụlọ arụmọrụ nke Obodo ukwu, ọkachasị AŞTİ. N’igosi na ha bidoro ikesa “ihe mmado” na-akpali akpali n’ahịa, Onye isi ndị uwe ojii nke Obodo ukwu Mustafa Mustafa Koç kwuru na ebum n’obi ha bụ ime ka ndị mmadụ mata banyere ahụ ike ha na maka ọdịmma ndị ọzọ.
Obodo Ankara na-aga n'ihu na ọgụ ya na ntiwapụ nke coronavirus site na ime ihe ọhụrụ.
N’ịga n’ihu ịdọ aka na ntị ya na akụkọ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, nyocha obodo na akwụkwọ mmado ya na oku nke “HomeKal”, ndị isi obodo ukwu ahụ kwadebere “debe ohere” gị iji kpalite mmata.
AKPO AKUKO AKUKO INI A INTİ
Debe “akwụkwọ mmado” ndị a na AİTİ, ebe a hụrụla okporo ụzọ nke ndị njem, Obodo Obodo na-ahụ na ụmụ amaala na-eche kwụ n'ahịrị tiketi n'ihu ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala na-a attentiona ntị na ịdọ aka ná ntị a.
N’ikwu na ọrụ ndị na-emerụ emerụ na-aga n’ihu na AŞT public maka ahụike ọha, Onye isi ndị uwe ojii nke Obodo Metropolitan Mustafa Koç kwuru na ha chọrọ ime ka ndị mmadụ mara banyere ụmụ amaala na ntinye a na-etinye na ala, wee sị:
Anyị na-echebara echiche banyere ọmụmụ banyere ọrịa na-alụ ọgụ nke obodo ukwu anyị na-agbasa mgbasa nke coronavirus. Ewezuga nke a, anyị na-ewere mgba a na-aga n'ihu ma na-arụ ọrụ iji mee ka ndị mmadụ mara banyere nchedo anya n'etiti ndị mmadụ. Enwere ngbawanye dị ukwuu na ọnụ ọgụgụ ndị njem, mana na AŞTİ, anyị mere "ihe mmado" na ebe echere n'ihu ikpo okwu, wee kegide ha na igwe mbuli elu. Emere okirikiri nke Mịnịsta na-ahụ maka ime obodo ka ọ nọrọ otu mmadụ na oche abụọ, na ịnọdụ ala n'oche azụ na oche n'ihu. Anyị gwara ndị ụlọ ọrụ bọs etiti. Anyị na-agbaso mmejuputa ya site n'aka ndị uwe ojii na ndị nche. Firlọ ọrụ nwere nnukwu ọnwụ ego ha ga enweta. Site na nkuzi nke Onye isi ala anyị Mr. Mansur Yavaş yana mkpebi nke oflọ Ọrụ Ntuziaka BUGSAŞ, anyị belatara ụgwọ ndị natara site na bọs ọkara ọkara na ụzọ ọpụpụ si AŞTİ. Anyị na-ahụ mmetụta nke ụmụ amaala anyị. Ana m akpọku ndị niile bi na Ankara, biko nọrọ n'ụlọ, nọrọ na-elekọta mmadụ mgbe ị na-apụ, gbochie mgbasa nke nje ahụ. ”
Mehmet Bingöl, onye na-arụ ọrụ n'ọfịs ndị na-ere tiketi, kwuru na ngwa ọhụrụ a bara uru ma kwuo, sị, “Ndị na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya baara uru. Anyị na-arịọ ha ka ha gwa anyị okwu site na iguzo na mmado ka ha wee nwee ike ime ka ndị mmadụ mara banyere ndị njem. Obodo ukwu na-aga n’ihu n’agha iji luso nje a ọgụ na AŞTİ. Achọrọ m isi ebe a zie Mansur Yavaş afọ ojuju m. ”Faruk Çayan, onye gara Denizli kwusiri ike na ịdọ aka na ntị na ịkpachara anya,“ Ha tinyere igwefoto na-ekpo ọkụ n'ọnụ ụzọ tube, ngwa a dọtara m ntị. Iji kpuchido anya nke mmekọrịta, achọpụtara m ngwa a nke ọma, yana enwere akwụkwọ mmado n’elu ala na igwe mbuli elu. Ka ha na-abata na bọs ahụ, onye nwe ụlọ ọrụ ahụ kesara ihe nkpuchi, ndị isi obodo mepere emepe mere ka mmadụ niile mata. Otu oche ka anọrọ na bọs maka ọhaneze. Ekwere m na ọ bụrụ na mmadụ niile lezie anya maka mkpa anyị, anyị ga-emeri ụbọchị ndị a siri ike ozugbo o kwere omume ”.
EGO NA-EGO NA ATA
N’igosi na ha na ekesara akwụkwọ mmado na-aga n’ahịa ndị ụmụ amaala ji eme ihe n’ụzọ miri emi, Onye isi ndị uwe ojii, Mustafa Koç kwuru na ha kpọrọ ndị na-ezigara akwụkwọ mmado ha kwadebere n’ụlọ.
Koç, onye nyochara ndị uwe ojii nyocha n'ahịa ebe emere itinye akwụkwọ ahụ, nyere ozi ndị a:
“N'ọnụ ụzọ ahịa, anyị na-akpọnye 'laa n'ụlọ mgbe ịrechara ahia' ịdọ aka na ntị. A na-ebugharị okirikiri ọzọ nke Ngalaba Mmepụta Anyị na mpaghara anyị. Iji gbasoo okirikiri nke na-ekpebi ọnụọgụ ndị ahịa enwere ike ịnọ dabere na mpụga square nke ahịa, anyị etinyela ịdọ aka ná ntị na-egosi mmadụ ole ndị ahịa nwere ike isi banye n'ọnụ ụzọ ahịa. Anyị na-edobekwara akwụkwọ mmado '' idobe anya gị 'n'elu ala iji gbochie ụkọ n'ihu ikpe ahụ. Anyị chọrọ ịmụba ihe ọmụmụ ndị a na Ankara dum. ”
N'ikwupụta na ya hụrụ ndị mmado ahụ mgbe ha na-azụ ahịa, Tuncer Ömür kwuru, “A ga-enwerịrị anya maka ahụ ike. Ngwa ezi uche dị na ya. Enwere m nnukwu obi ụtọ na omume nke idobe oghere dị n'etiti ndị ahịa mgbe ịre ahịa na onye na-ere ego. Ọ ga-amasị m ikele onye isi ala anyị na onye ọ bụla nyere aka. ”
AKW FORKWỌ EGO NA-ELEVATORS
A na-etinye akwụkwọ mmado ahụ, nke a malitere itinye n'ụlọ ọrụ ndị a na-arụ ọrụ na Obodo Obodo, na etinyere n'ime ebe ndị mbuli elu.
Na-eleba anya na ahụike nke ndị ọrụ nwere ihe mmado site na ịdọ aka na ntị nke ichebe ohere mmekọrịta, Obodo ime obodo dọrọ mmadụ 4 aka na ntị ka ha bulie igwe mbuli elu n'ihe ize ndụ nke ntiwapụ nke ọrịa. Başak Yılmaz sitere na ndị ọrụ ụgbọ ala kwuru, "Enwere m afọ ojuju n'ihe ndị enyere iji chebe ahụike ndị ọrụ. Ọ ga-amasị m ikele onye ọ bụla nyere aka, ọkachasị onye isi obodo anyị bụ Mansur Yavaş. "Esra Okkalı kwuru," Enwere m obi anụrị maka ihe omume mmekọrịta ọha na ebido na Obodo. " Osman Özcan kwuru na ya na-eche na akwụkwọ mmado nke nwere ịdọ aka na ntị na-elekọta mmadụ maka ahụike dị irè, wee sị, "Achọtara m omume ka anyị chekwaa ohere mmekọrịta nke obodo anyị bidoro n'ihi ọrịa na-efe efe".
A ga-etinye ndị na-eme ihe ntanetị na ọdụ ụgbọ oloko na ANKARAY, ebe ụmụ amaala na-eme njem kwa ụbọchị, na obere oge.
Ọmụmụ Ihe Ọmụma Maka Ọkwa Nrịgo na TCDD 1.
Ịmata na ọkwa agbago na Adana
Mahadum Beykoz na TCDD na-ahazi ihe mberede / ihe omume nke ime ihe na ụlọ okporo ígwè
Ejiri ụzọ dị iche iche na-agagharị agagharị maka ịzụlite mmata
Ọmụmụ ihe mberede okporo ụzọ maka Alanya Municipality Staff
Ọmụmụ Ihe Ọmụma okporo ụzọ si Sakarya Metropolitan
Itinye Uku N'anya
Ahụike Ndị Ọrụ Ahụike Ahụike Ahụike Ahụike Ha Nwetara!